လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ကျဆုံးသွား တဲ့ သူတွေ ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု တွေ အပါအဝင် ဒဏ်ရာ ရရှိသူတွေကို ပါ ကိုယ်တိုင် သွား ရောက် လှူတမ်းမှုပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ မေ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ကျဆုံးသွား တဲ့ သူတွေ ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု တွေ အပါအဝင် ဒဏ်ရာ ရရှိသူတွေကို ပါ ကိုယ်တိုင် သွား ရောက် လှူတမ်းမှုပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ မေ
လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ကျဆုံးသွား တဲ့ သူတွေ ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု တွေ အပါအဝင် ဒဏ်ရာ ရရှိသူတွေကို ပါ ကိုယ်တိုင် သွား ရောက် လှူတမ်းမှုပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ မေ
အဆွေးသီချင်းတွေကို အလွမ်းဓာတ်ခံ ပါပါ သီဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ အားပေး ထောက်ခံမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိလာခဲ့တဲ့ မေကို တော့ အား လုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သီချင်းတွေကတော့ လူငယ် ပရိသတ်တွေ အကြား ရေပန်းစားနေပြီး ယခုအချိန်မှာ နေရာ တစ်ခု ထိ ရောက်ရှိအောင် မြင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်မှာတော့ သူမဟာ ပြည်သူ တွေ ၊ ပရိသတ်တွေ နဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရပ်တည်နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေ အပါအဝင် ဒဏ်ရာ ရရှိသူတွေကိုပါ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူတမ်းခဲ့တာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ “မြောက်ဥက္ကလာ အတွက် အလှူငွေကောက်ခံ ခဲ့တာ စုစုပေါင်း တစ်ရာ့တစ်သိန်းခွဲတိတိ (10150000) ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ လှူဒါန်း သင့်တာလေးတွေ သေသေချာချာစုံစမ်းပြီး မြောက်ဥက္ကလာမှ ကျဆုံး သွားတဲ့ ကိုစည်သူရှိန် ၊ ကိုအာကာမိုး ၊ ကိုဇော်ဇော်မိုး ၊ အရှေ့ဒဂုံမှ မြောက်ဥက္ကလာတွင် ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုဝေယံမောင်မောင် ၊ မြောက်ဒဂုံမှ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုချစ်မင်းသူ နဲ့ မြောက်ဥက္ကလာမှ သရက်ရွက်ထိ ဒဏ်ရာရရှိသူ ကိုဇွဲပြည့်စုံ တို့ကို အရင်ဆုံး တစ်ဦးလျှင် ဆယ်သိန်းကျပ်စီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ”
“ကျန်တဲ့အလှူငွေ လေးဆယ့်တစ်သိန်းခွဲ ကိုလည်း တကယ် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ ထပ်စုံစမ်းပြီး လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကာလမှာ သွားရေးလာရေး အခက်အခဲကြောင့်ရယ် တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို စုံစမ်းနေတာရယ်ကြောင့် ကြန့်ကြာနေခဲ့တာပါ။ မေနဲ့အတူပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော ချစ်ပရိသတ်တွေရောကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီ့ထက်မကလည်း အများကြီး လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေရှင် ကျန်တဲ့အလှူငွေများကိုလည်း လှူဒါန်းပြီးရင်ထပ်တင်ပေးပါမယ်ရှင် ။ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အားလုံးသာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်……. ” ဆိုပြီး အလှူရှင် စာရင်းတွေနဲ့ အတူ သွားလှူဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ ဖော်ပြပေးလာတာကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်……။
အေဆြးသီခ်င္းေတြကို အလြမ္းဓာတ္ခံ ပါပါ သီဆိုၿပီး ပရိသတ္ေတြ အားေပး ေထာက္ခံမႈကို အခိုင္အမာ ရရွိလာခဲ့တဲ့ ေမကို ေတာ့ အား လုံး သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ သီခ်င္းေတြကေတာ့ လူငယ္ ပရိသတ္ေတြ အၾကား ေရပန္းစားေနၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာ ေနရာ တစ္ခု ထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ျမင္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ေတးသံရွင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ သူမဟာ ျပည္သူ ေတြ ၊ ပရိသတ္ေတြ နဲ႔ အတူ အမွန္တရား ဘက္ကေန ရပ္တည္ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာလည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာ က်ဆုံးသြားတဲ့ သူေတြရဲ႕ က်န္ရစ္သူ မိသားစုေတြ အပါအဝင္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူေတြကိုပါ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ လႉတမ္းခဲ့တာ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေဖာ္ျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမ ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ “ေျမာက္ဥကၠလာ အတြက္ အလႉေငြေကာက္ခံ ခဲ့တာ စုစုေပါင္း တစ္ရာ့တစ္သိန္းခြဲတိတိ (10150000) ရရွိခဲ့ပါတယ္ ။ လႉဒါန္း သင့္တာေလးေတြ ေသေသခ်ာခ်ာစုံစမ္းၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာမွ က်ဆုံး သြားတဲ့ ကိုစည္သူရွိန္ ၊ ကိုအာကာမိုး ၊ ကိုေဇာ္ေဇာ္မိုး ၊ အေရွ႕ဒဂုံမွ ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုေဝယံေမာင္ေမာင္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံမွ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုခ်စ္မင္းသူ နဲ႔ ေျမာက္ဥကၠလာမွ သရက္႐ြက္ထိ ဒဏ္ရာရရွိသူ ကိုဇြဲျပည့္စုံ တို႔ကို အရင္ဆုံး တစ္ဦးလွ်င္ ဆယ္သိန္းက်ပ္စီ သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္ ”
“က်န္တဲ့အလႉေငြ ေလးဆယ့္တစ္သိန္းခြဲ ကိုလည္း တကယ္ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ ထပ္စုံစမ္းၿပီး လႉဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီကာလမွာ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ရယ္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို စုံစမ္းေနတာရယ္ေၾကာင့္ ၾကန႔္ၾကာေနခဲ့တာပါ။ ေမနဲ႔အတူပါဝင္လႉဒါန္းေပးၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြေရာကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင္ ဒီ့ထက္မကလည္း အမ်ားႀကီး လႉဒါန္းႏိုင္ၾကပါေစရွင္ က်န္တဲ့အလႉေငြမ်ားကိုလည္း လႉဒါန္းၿပီးရင္ထပ္တင္ေပးပါမယ္ရွင္ ။ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အားလုံးသာဓုေခၚႏိုင္ဖို႔ ဓါတ္ပုံေလးေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္……. ” ဆိုၿပီး အလႉရွင္ စာရင္းေတြနဲ႔ အတူ သြားလႉျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမွတ္တရ ပုံေလးေတြ ေဖာ္ျပေပးလာတာကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္……။
Previous post လက်ရှိ အချိန် မှာ စိတ်အားငယ် နေတာကြောင့် မျက်ရည်တွေ ကျနေပြီး ဖေဖေ နဲ့ မေမေကိုသတိရနေတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post မိဘနှစ်ပါး ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကြောင့် လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ မပါဝင်နိုင်တာပါ လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း